दुहबी भेट्रान (रातो) सेमिफाइनलमा – Khel Dainik
दुहबी भेट्रान (रातो) सेमिफाइनलमा
कार्तिक २७, २०७८ | (PostaComment)
दुहबी (खेलदैनिक) । संघर्षपुर्ण जितका साथ आयोजक दुहबी भेट्रान फुटबल क्लब यहाँ जारी प्रथम दुहबी भेट्रान कप नकआउट फुटबल प्रतियोगिताको सेमफिाइनलमा प्रवेश गरेको छ ।
शनिबार भएको पहिलो क्वाटरफाइनलमा कुलिफुयाङ भेट्रान क्लब, मोरङलाई टाईब्रेकरमा ३–१ ले हराउँदै दुहबी भेट्रान (रातो) ले सेमिफाइनल यात्रा तय गरेको हो । त्यसअघि श्री सरस्वती उमाविको खेलमैदानमा सम्पन्न निर्धारित समयको खेल दुवै टोलीले १–१ गोलको बराबरी खेलेका थिए ।
खेलको १५औं मिनटमा खगेन्द्र घिमिरेको गोलबाट अग्रता बनाएको दुहबीले त्यसलाई जोगाउन नसक्दा टाईब्रेकरसम्म संघर्ष गर्नुपर्यो । उता कुलिफुयाङका लागि २०औं मिनटमै महानन्द राजवंशीले बराबरी गोल फर्काउन सफल भएका थिए ।
खेलमा आयोजक दुहबीका दर्शन कोयु राई म्यान अफ द म्याच घोषित भए । उनलाई मनमोहन स्पोर्टस एकेडेमीका अध्यक्ष डा. सुभाष पोख्रेलले नगदसहित पुरस्कृत गरे ।
प्रतियोगिता अन्तरगत कार्तिक २८ गते आइतबारको दोस्रो क्वाटरफाइनल खेल जनता भेट्रान क्लब, इटहरी र बिराट बुद्ध भेट्रान क्लब, बिराटनगरबीच हुने आयोजकले जनाएको छ ।
दुहबी भेट्रान फुटबल क्लब, सुनसरीको आयोजनामा जारी प्रतियोगिताको विजेताले उपाधिसहित नगद ५१ हजार हात पार्नेछ भने उपविजेताले ३१ हजार प्राप्त गर्नेछ । फाइनल खेल मंसिर ४ गतेका दिन हुनेछ ।
← बंगलादेशसँग हार्यो माल्दिभ्स धनगढीलाई महिला लिग छनौटको उपाधि →
हरि खड्का विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर कार्तिक २७, २०७८
एपिएफ आहा! रारा गोल्डकपको फाइनलमा कार्तिक २७, २०७८
मौरिसस विरुद्ध बन्द प्रशिक्षणमा रहेका सबैलाई अवसर कार्तिक २७, २०७८
दीप ज्योतीलाई जिल्ला लिगको उपाधि कार्तिक २७, २०७८
रशिला बिश्व वरियताको ७ औं स्थानमा कार्तिक २७, २०७८
नेपाल विरुद्ध मौरिससः एक तिहाई दर्शकले रंगशालामा प्रवेश पाउने कार्तिक २७, २०७८